Ukutya okungaqhelekanga eTshayina | Ukuhamba kwe-Absolut
Izitya ezingaqhelekanga zesitshayina
maruuzen | | iTshayina
Ukuba sithetha malunga izitya ezingaqhelekanga, ii-flavour, condiments kunye neemveliso ezivela kwesiqhelo, emva koko ukutya kwaseChinese ikhokele. AmaTshayina ayathanda ukutya kwaye batya ngokoqobo yonke into.
Ngelixa kuyinyani ukuba abantu bane-omnivorous kwaye inkcubeko ezininzi ziyahlonipha ukuba "zonke iigciwane ezihambayo ziya kuthi ziphele ngamathe," i-China iyamangalisa. Masibone namhlanje eyona ilungileyo izitya ze-china ezingaqhelekanga. Ngaba ukulungele ukuchukumiseka kancinci?
1 Ukutya kwamatshayina
2 Intloko yomvundla ebandayo
3 Iilwimi zedada kunye nolwandle
4 Ubudoda bezilwanyana
5 Amehlo e-tuna
6 Amasende enkukhu
8 Isuphu yenyoka
9 Intaka ezincinci namahobe
Ngokubanzi, kufuneka kukhunjulwe ukuba I-China lilizwe elikhulu kwaye inezizwe ezininzi. Zingaphezu nje kwama-50 iintlanga ezahlukileyo, ngalinye lineenkcubeko zalo.
Ewe uninzi lwamaTshayina luhlanga lweHan, ngaphezulu kwe-90%, kodwa kunjalo, ubukhulu belizwe benza Izithako zokupheka zaseTshayina zahluke kakhulu. Zine ezine iikhitshi ezinkulu okanye iiseti zokupheka kunye nobuchule, kodwa into etsala umdla wokutya okungaqhelekanga izitya zaseTshayina zizithako zazo.
Makhe sazi ezinye zezona zitya zingaqhelekanga.
Intloko yomvundla ebandayo
Esi sitya Kuqhelekile eChengdu, kwiphondo laseSichuan, ikomkhulu lesizwe lepanda. Kwintloko yomvundla akukho nyama ingako kwaye ewe ngamafutha, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo amazinyo atsala umdla.
Intloko yomvundla Yiyo ityhubhu kwaye kuthatha ixesha ukulungiselela. Intloko iqale ifakwe iblitshi emanzini ashushu emva koko ishiyeke ukuba ifake kumxube wetyuwa, iwayini kunye nomgubo wejinja iiyure ezili-12. Iphekwe nezinye iincasa ezinje ngesilili eshushu, isinamoni okanye ifennel kangangemizuzu elishumi okanye njalo. Kukho ixesha elininzi lokuba inyama ikwazi ukufunxa zonke iincasa.
Okokugqibela, intloko yomvundla ikulungele ukunikwa isinongo ngeoyile yesesame encinci kunye necil powder Ukutya eli qhekeza akukho lulaYena nawe kufuneka ube nobuchule, njengaxa usitya unonkala okanye ilobster. Chengdu ukhenketho lokutya luhlala lubandakanya oku kutya xa uhamba, zive ukhululekile ukuzama.
Baninzi abathengisa ezitalatweni kunye neeresityu ezincinci ezinikezela ngesi sibheno. Ewe, ayisositya siphambili kodwa yinto enikwa nesiselo okanye njengesitya esecaleni.
Iilwimi zedada kunye nolwandle
Oku kuyatyiwa nako eChengdu kwaye njengoko besitsho, ubuncinci iilwimi zedada azizimbi. Ngaba uyalutya ulwimi lwenkomo? Ke akufuneki uchukunyiswe lulwimi lwedada. Ubume buyothusa, okanye bunomtsalane, ngakumbi isiseko esibonakala ngathi sineengcambu ezimile okomlilo.
Malunga ne amahasher, ke, apha igama ihashe alihambelani nesilwanyana. Apha Zizintlanzi ziyatyiwa, nokuba zithini na iifom zazo. Zihlala zincanyathiselwa kumazinyo okanye ezomiswe ngomgubo ukuze zongezwe kwirayisi yewayini, isuphu okanye iti. Yintoni egqithisile, zisetyenziswa kumayeza amaTshayina ke ukusetyenziswa kwayo kukwimfuno ephezulu.
Unoku-odola eBeijing kwaye esi sidlo sithathwa njengokutya okumnandi kwaseTshayina. Imenyu ingakubonisa Iipenise zobukhulu obahlukeneyo kunye nezilwanyana ezahlukeneyo. Ewe, ukongeza kwilungu lobudoda begusha, banokukunika inkunzi yenkomo, imvana nenja. Kubonakala ngathi amaTshayina ayithatha njengelungileyo empilweni kwaye Inepropathi ye-aphrodisiac.
Iipenisi ezimhlophe zilunge ngakumbi kubafazi kwaye ezimnyama zinikwa amadoda. Iqhekeza liziswa kunye nomhluzi apho kuphekwe khona okanye kwisitya esikhulu, sisasazwa njengezibheno. Ngokucacileyo, ukutya ipenisi ayisiyiyo incasa kodwa malunga ukuthungwa, kuba ngumzimba womqolomba.
Kubonakala ngathi incasa imnene kwaye ixhomekeke kakhulu kwisosi oyithi nkxu ukuyitya. Bathi incanca yenkunzi yenkomo ifana kakhulu naso nasiphi na isiqwenga senyama, nangona sinamafutha amaninzi.
Ilungu lobudoda legusha likhangeleka ngathi yithenda, inde kwaye ibhityile kwaye ifana nentsini. Kwaye inja yenja inzima kwaye inencasa ngakumbi. Kufuneka uyihlafune kakhulu ukuze ukhulule incasa njengoko incindi zayo ziphuma.
Amehlo e-tuna Zityiwa eTshayina naseJapan. Zijongwa njengesitya esimnandi kakhulu kwaye kwezinye iindawo ziyatyiwa eluhlaza, kwezinye kuqhelekile ukuzipheka. Kwimeko yaseJapan, zihlala ziphekwa ngesobho se-miso.
Amehlo ephekiweyo etyhuna atshintsha umbala kwaye awusabonakali ekuhleni ukuze abe mhlophe kwaye aqine. Imisipha kunye namafutha ajikeleze kuyo kubonakala ngathi yeyona ndawo imnandi kakhulu kwisitya. Bathetha lonto banencasa ebukhali kodwa ayithandeki, iyafana neembaza.
Inxalenye nganye yamehlo etyhuna ityebile kwi-Omega 3.
Ukuba undwendwela iHong Kong, unokufumana kwimenyu yeendawo zokutyela ezininzi ezinesitya.
Zifana neembotyi ezinkulu ezimhlophe. Ubilisiwe okanye ujiweingaphakathi ny ihlala ithambile. Banikwa umhluzi kwaye unoku-odola kunye nerayisi okanye ii-noodle.
Esi sidlo sithathwa njengokutya okumnandi e-China. Ziphekwe ngeendlela ezininzi: eyosiweyo, eqhotsiweyo, eyosiweyo okanye ephilayo, ukuba ungazama. Oonomadudwane abaqhotsiweyo zezona zixhaphakileyo. Ezi zinambuzane zinesitovu esingasuswanga kodwa akukho nto ixhalabisayo. aziyityhefu ukuba ibonakaliswe kubushushu. Ewe imilenze kufuneka isuswe.
Oonomadudwane ayikuko ukutya kwesintu e-chinaZityiwa kwiindawo ezithile okanye kwiimarike, kodwa zihlala zingaqhelekanga kwaye zinqabile.
Esi sidlo sasivela kumazantsi eTshayina, kwinto eyaziwa ngoku njengephondo laseGuangdong. Kuye kwaziwa ubuncinci ukususela kwiwaka lesithathu leminyaka BC kunye kumaxesha amandulo yayiyinto yobunewunewu eyayifunyanwa kuphela zizityebi. Emva kwexesha, yaya yaziwa ngakumbi ngenkulungwane ye-XNUMX.
Kudla ngokutyiwa eHong Kong, ngakumbi ngexesha lasebusika, njengendlela yokuzivuyisa. Kuqwalaselwa njengesitya esimnandi ngakumbi kwaye ngamanye amaxesha isuphu iyakhonzwa kunye nenyoka ebhijelwe ngaphakathi kwisitya, ukuyonwabisa. Kubonakala ngathi unolwazi oluncinci Ityuwa ngaphezu kwenkukhu kwaye ukutya kwakhe kungcono zihlafuna.
Isiko lokutya isuphu yenyoka lidala kwaye isitya ngokwaso sinokuqulatha, ukuba ayisosilwanyana siphela, ubuncinci iintlobo ezintlanu ezahlukeneyo zeenyoka. Inyama iyabiliswa ngamathambo engulube, inkukhu kunye nezinongo kwaye ke umhluzi obangelwayo umnandi kakhulu. Yonke into iyabila iiyure ezininzi kunye nama-mushroom, amagqabi e-chrysanthemum, ijinja, ingca yengca kunye namayeza omhluzi ukuze umhluzi uyinto emnandi kunye nesiqholo ngaxeshanye.
Ngamanye amaxesha inyoka iyasikwa ibe ngamacwecwe kwaye njengoko benditshilo ekuqaleni, nabani na oyityayo uyithelekisa nenkukhu nangona kunzima. Ezitratweni zaseHong Kong uza kubona iivenkile zokutyela ezithi "Snake King" ngesiTshayina, kwaye zihlala zikhonza ezinye izitya ezisekwe kwinyoka ezinje ngecasseroles, inyoka eqhotsiweyo kunye nezinye ukongeza kwisobho.
Ukuba umbono wokutya isuphu yenyoka uyathandeka kuwe, ungaphoswa leli thuba, kuba ezi restyu ziphelile kuba bafuna amava kunye nobugcisa obungasasebenziyo kangako.
Intaka ezincinci namahobe
Ukutya amahobe ayonto inokusoyikisa. Emva kwayo yonke loo nto, abemi baseYurophu babesitya amahobe de kube kudala. Kodwa ukutya uhlobo lweentaka oqhele ukuzibona epakini ... yenye into, akunjalo?
Okungakumbi ukuba uyababona wanamathela kwi-toothpick, epheleleyo, enolwandle kwaye ikulungele ukutyiwa. Ukutya amahobe yinto eyonwabisayo yaseCanton Kukwimenyu yeendawo zokutyela ezininzi eHong Kong nakwezinye izixeko.
E-Hong Kong zityiwa kuphela Amahobe angamawaka angama-800 ngonyaka. Azikhuliswanga okwenkukhu ngoko ke zinexabiso elahlukileyo kwaye zihlala zivela kwizidlo kunye nemibhiyozo yosapho. Ijuba ke liyinxalenye ephambili yesidlo. Ngamanye amaxesha ziyaphekwa kwi-grill okanye ziphekwe embizeni yodongwe, kumhluzi onesinamon kunye ne-anise imizuzu engama-20. Ukuxinana, ukuphola, kunye nefry ngendlela enokuthi ulusu lwayo lube mnandi kodwa lumanzi.
Iyabiliswa, ukuba isuphu sisitya sokuqala, okanye inyama iyasuswa, igalelwe kwaye iyosiwa ngemifuno ezakunikwa kamva kumagqabi eletisi. Ukuba ihobe okanye intaka inqunyulwe yaziziqwenga ezincinci, isitya sinokuzisa iingcambu zoqalo, isosi yeoyster, amandongomane aqingqiweyo, amakhowa, kunye neetshiphusi ezityiwa ngesandla. Ngokwenyani, iintaka ezincinci kunye namahobe ziphekwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo.
Nazi ezinye ze izitya ezingaqhelekanga zokutya kwaseTshayina. Ngaba unesibindi sokuzama enye?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Izitya ezingaqhelekanga zesitshayina
Iinkulungwane ezilishumi zePrague
Ezinye iifilimu ezifakwe kwiVenice